गर्भवतिले थाहा पाइराख्नु पर्ने महत्वपूर्ण शब्दावली र जानकारी | Nepali In Japan
गर्भवतिले थाहा पाइराख्नु पर्ने महत्वपूर्ण शब्दावली र जानकारी
जापानमा गर्भवति हुनु हुन्छ ? आजको यस लेखमा हामीहरुले जापानी भाषामा गर्भावस्था र प्रसवसँग सम्बन्धित विविध उपयोगी शब्दावलीहरुबारे बताउन गइरहेका छौं ।
यसबाहेक पनि यस लेखमा जापानमा गर्भवति हुनु र जापानमा शिशु जन्मेपछि पाइने आर्थिक सहायता बारे केही जानकारीहरु समेत दिनेछौं । यो जानकारी जापानी भाषा सिकिरहनुभएकाहरुका लागि पनि उपयोगी छ ।
धेरै प्रयोगमा आउने शब्दहरु
तल जापानमा गर्भवति महिलाको स्वास्थ्य जाँचको बेलामा थाहा पाइराख्नु पर्ने केही शब्दहरु बताइएको छ ।
– 産婦人科 ( Sanfujinka ) – प्रसुति एवं स्त्री रोग
– 病院 ( Byouin ) – अस्पताल
– 訪問時間 ( Houmon jikan ) – भेट्ने समय
– 医者 ( Isha ) – डाक्टर
– 看護師 ( Kangoshisan ) – नर्स
– 助産師 ( Josanshi ) – सुडेनी
– 妊娠 ( Ninshin ) – गर्भावस्था
– 妊婦 ( Ninpu ) – गर्भवति महिला
– 分娩 ( Bunben ) – प्रसव
– 入院 ( Nyuuin ) – भर्ना
– 定期検診 ( Teiki Kenshin ) – नियमित जाँच
– 血液型 ( Ketsueki Gata ) – रगतको प्रकार
– 体重 ( Taijuu ) – तौल
– 身長 ( Shinchou ) – उचाई
– 体温 ( Taion ) – शरीरको तापक्रम
– 血圧 ( Ketsuatsu ) – रक्तचाप
गर्भावस्था र प्रसव
तल गर्भावस्था र प्रसवका बेलामा धेरै प्रयोगमा आउने जापानी शब्दहरु दिइएको छ ।
– 最終月経 ( Saishuu Gekkei ) – अन्तिम महिनावरी
– 胎児 ( Taiji ) – भु्रण
– 胎児心音 ( Taiji Shinon ) – भ्रुणको मुटुको चाल
– 胎動 ( Taidou ) – भु्रणको चाल
– 超音波検査 ( Chouonpa kensa ) – अल्ट्रासाउन्ड जाँच
– 分娩予定日 ( Bunben yoteibi ) – प्रसवको अनुमानित समय
– つわり ( Tsuwari ) – बिहान देखिने लक्षणहरु
– 痛い ( Itai ) – पीडा
– 陣痛 ( Jintsuu ) – प्रसव पीडा
– 頭痛 ( Zutsu ) – टाउको दुखाई
– はきけ ( Hakike ) – वाकवाकी लाग्ने
– 背中が痛い ( Senaka ga itai ) – मेरो ढाड दुख्यो
– 出血 ( Shukketsu ) – रक्तश्राव
– 注射 ( Chusha ) – सुई
– 麻酔 ( Masui ) – एनस्थेटिक
– 分娩室 ( Bunben shitsu ) – डेलिभरी कक्ष
– 帝王切開 ( Teiou sekkai ) – सी–सेक्शन
– 経腟分娩 ( Keichitsu bunben ) – सामान्य प्रसव
– へその緒 (Heso no o ) – सालनाल
– いきんでください ( Ikindekudasai ) – बल गर
– マタニティーマーク ( Mataniti maku ) – गर्भावस्थाका बेलामा बस्ने दाग
–母子健康手帳 ( Boshi kenkou techou ) – आमा र शिशुको लागि हेल्थ बुक
तल शिशुको जन्मपछि प्रयोग गर्न सकिने केही शब्द र शब्दावलिहरु दिइएको छ ।
बच्चासँग सम्बन्धित केही शब्दावलीहरुः
– 赤ちゃん ( Akachan ) – शिशु
– 双子 ( Futago ) – जुम्ल्याहा
–出生証明書 ( Shussei shoumeisho ) – जन्म प्रमाणपत्र
– 新生児室 ( Shinseiji shitsu ) – नर्सरी
– 赤ちゃんにあえますか。 ( Akachan ni aemasuka ) – म मेरो बच्चा हेर्न सक्छु ?
– 赤ちゃんを抱っこしてもいいですか。 ( Akachan o dakko shitemo iidesuka ) – म मेरो बच्चालाई बोक्न सक्छु ?
– ミルク ( Miruku ) – दूध
– 人工栄養 ( Jinkou eiyou ) – बोतलबाट खुवाउने
– 母乳 ( Bonyuu ) – आमाको दूध
– 母乳栄養 ( Bonyuu eiyou ) – स्तनपान
– 母乳をあげたいです ( Bonyuu o agetaidesu ) – म बच्चालाई स्तनपान गराउन चाहन्छु ।
– 授乳室はどこですか？ ( Jyunyushitsu wa doko desuka? ) – नर्सिङ कक्ष कहाँ छ ?
जापानमा स्थानीयहरुले गर्भावस्थालाई महिला मानसिक र शारीरिक दुबै रुपमा अनुशासित रहनु पर्ने अवधिका रुपमा हेरिन्छ । यहाँ ‘गमन’ संस्कृति नै छ । यसको अनुवाद ‘सहन’ वा ‘धारण गर्ने’ भन्ने हुन्छ । तसर्थ, अधिकांश जापानी महिलाहरुले ‘प्राकृति रुपमा’ बच्चालाई जन्म दिन खोज्छन् । गर्भावस्था वा प्रसव पीडाका बेलामा उनीहरुले दुःखाई कम गर्ने कुनै पनि औषधि प्रयोग गर्दैनन् ।
तपाईहरुलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर जापानी अस्पतालहरुमा पीडा कम एनेस्थेटिक लगायत खासै प्रयोग गरिदैंन । तपाई पनि गर्भावस्था वा प्रसव पीडाका बेलामा पेन रिलिफ लिन खोज्दैं हुनुहुन्छ, भने अस्पतालमा यसबारे स्पष्ट रुपमा सोधपुछ गरेर निक्र्यौल गर्नुहोला ।
जापानमा प्रसव पीडाका बेलामा जन्मिन लागेको शिशुका पिताहरुलाई श्रीमतिसँगै बस्ने अनुमति सधैं दिइदैंन । के यो कुरा तपाईलाई थाहा छ ? केही अस्पतालहरुमा महिलाले डेलिभरी कक्षमा बच्चालाई जन्म दिँदै गर्दा पितालाई बाहिर पर्खिने कोठामा बस्न लगाइन्छ । प्रसव पीडा भइरहेकै बेलामा श्रीमान पनि सोही कक्षमा रहँदा डाक्टरहरुको एकाग्रता भंग हुन्छ वा उनीहरुलाई बाधा उत्पन्न हुन्छ भनेर पनि यस्तो गरिएको हो । तर सबैं अस्पातलमा यस्तै हुँदैन । केही अस्पतालहरुमा भने गर्भवति महिलालाई प्रसव व्यथा लागिरहेको बेलामा उसको जीवनसाथीलाई पनि सँगै बस्न दिइन्छ । यस्तो सुविधा भएको अस्पताल कहाँ छ बुझेर पनि तपाई त्यस्तै अस्पतालमा जान पनि सक्नु हुनेछ ।
जापानमा सबै गर्भवति महिलाले त्यहाँको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयबाट पनि मातृ देख–भाल प्राप्त गर्छन् । केरिङको अर्थ नचिनेकै भएपनि गर्भवति महिलाहरुलाई पनि विशेष देख–भाल देखाउने भन्ने हो । जस्तैः रेल वा बसमा गर्भवति महिला देख्दा उनीहरुलाई आफू बसेको सिट छोडिदिने, त्यस्ता महिला आसपास भएको बेलामा धुम्रपान नगर्ने आदि ।
जापानमा नवजात शिशुले पाउने वित्तीय सहायता
जापानको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमामा बिमित हुनु हुन्छ वा कुनै जापानी कम्पनीमा कार्यरत हुनु हुन्छ भने तपाईले जापानी बीमाका लाभ पाउनुहुनेछ ।
सरकारले ४२०,००० येन बराबरको ‘शिशु जन्म तथा हेरचाह एक मुष्ठ अनुदान’ दिन्छ । यसबाट बच्चा जन्मने बेलामा लागेको केही खर्चको भर्पाइ हुन सक्छ । यसबाहेक पनि सरकारले शिशु तीन वर्षको उमेर नपुग्दासम्म मासिक १५,००० येन पनि बाल भत्ता पनि दिन्छ । बच्चा उच्च शिक्षाको तेस्रो वर्ष नपुग्दासम्म हरेक महिना प्रति बच्चा १०,००० येन पनि दिन्छ ।
Prevयस्तो छ जापान प्रबेश सम्बन्धी नयाँ नियम
Nextरिरेकिशोमा फोटो हाल्ने/टाँस्ने तरिका